ပရိသတျတှဝေမျးသာအောငျ အခုအခြိနျမှ ထုတျပွောပွလိုကျတဲ့ ဖာနနျဒကျပွောတဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ကတိ အကွောငျး…. – Premier League Special
ပရိသတျတှဝေမျးသာအောငျ အခုအခြိနျမှ ထုတျပွောပွလိုကျတဲ့ ဖာနနျဒကျပွောတဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ကတိ အကွောငျး….
January 9, 2021 yeminn Article 0
ဖာနနျဒကျဈဟာ အခုဆိုရငျ ယူနိုကျတကျကို ရောကျရှိလာတာ တဈနှဈရှိပွီဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အသငျးမှာ အကောငျးဆုံး ခွစှေမျးပွကစားနိုငျနသေလို အသငျးရဲ့အဓိကကစားသမားတဈဦးလညျးဖွဈနပေါတယျ။ ယူနိုကျတကျမှာ ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုတှဲဖကျမှုဟာ အောငျမွငျမှု ကွီးကွီးမားမားမရရှိသေးပမေယျ့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖေးမကူညီလာတာကို တှေ့ မွငျရပါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈ ရောကျရှိလာခြိနျက ယူနိုကျတကျပရိသတျတှကေ ကှငျးလယျမှာ ပေါ့ဘာနဲ့ ဖာနနျဒကျဈတို့အတှဲဟာ တောကျပလာမယျလို့ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ ဆိုလျရှားရဲ့ နညျးစနဈမှာ သူတို့နှဈယောကျအတှဲ ပှဲထှကျလာခြိနျဆိုရငျ ဖာနနျဒကျဈ က တိုကျစဈပိုငျးပိုမိုတာဝနျယူလာနိုငျသလို ပေါဂျ့ဘာ က ခံစဈနဲ့ခြိတျဆကျမှု့ကိုတာဝနျယူထားရတာကို တှမွေ့ငျလာရပါတယျ။ ဖာနနျဒကျဈက ပေါ့ဘာနဲ့ ပတျသကျပွီး အခုအခြိနျမှာ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ဆကျဆံရေး အခွအေနတှေကေို ထုတျဖျောပွောပွလာခဲ့သလို သူအသငျးကိုရောကျကာစက ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့အဖွဈတှကေို ပွနျလညျပွောပွခဲ့ပါတယျ။
“ကြှနျတျောနဲ့ ပေါ့ဘာကွားမှာ ကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိပါတယျ။ ဒီကို စရောကျကာစက သူနဲ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဆကျသှယျရေးကွာခံဘာသာစကားက အီတလီစကားပေါ့ဗြာ။ သူနဲ့ ကြှနျတျောက အီတလီမှာကတညျးက သိကွပါတယျ။ ဘာသာစကား အဆငျပွတေော့ သူနဲ့ အလုပျတူလုပျကွတဲ့အခါ အရာရာကလှယျကူတာပေါ့။
ယူနိုကျတကျကို ကြှနျတျော ရောကျခါစတုနျးက သူက ဒဏျရာရနလေို့နားနခြေိနျ။ သူ့ရဲ့ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝဖို့ ကွိုးစားတာတှေ သီးခွားလကေ့ငျြ့တာတှေ ကြှနျတျောတှရေ့ပါတယျ။ တဈခါတဈရံအခြိနျတှဆေိုရငျ သူနဲ့ စကားပွောဖွဈတဲ့အခါတှဆေိုရငျ သူက‘ငါမငျးရဲ့ ကစားဟနျ တှကေိုတှတေ့ယျ။ ငါသာကွံခိုငျမှု့အပွညျ့ရလာပွီးရငျ မငျးကို ထောကျပံပေးမယျလို့၊ ကှငျးထဲမှာ မငျးဘယျနရောမှရှိနနေေ ငါမငျးကိုရအောငျရှာပွီး ဘောလုံးပို့ပေးမယျ’လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။
ဒါကကြှနျတေျာ့ကို ယုံကွညျမှု့မြားစှာ ရစခေဲ့တယျလေ။ သူ ပွနျကောငျးမှနျလာတဲ့အခါမှာလညျး ကြှနျတေျာ့ကို ကူညီပေးခဲ့သလိုအသငျးကိုပိုကောငျးအောငျပွုလုပျပေးနိုငျတဲ့သူပါပဲ”။
ယူနိုကျတကျကို ပွောငျးရှဖေို့အတှကျလညျး ကြှနျတျောကိုအကွံပေးခဲ့တဲ့သူတှထေဲမှာ ရဲ့ လကျရှေးစငျအသငျးဖျောဖွဈတဲ့ ခရစ်စတီယာနိုရျောနယျဒိုနဲ့ နာနီတို့လညျးပါဝငျပါတယျ။ ရျောနယျဒိုနဲ့ သူက အခုအခြိနျအထိ အခြိအဆကျရှိနသေလို ယူနိုကျတကျအသငျးအကွောငျးတှကေို ပွောလရှေိ့တယျလို့ ဖာနနျဒကျက ပွောခဲ့ပါတယျ။ “သူက ကြှနျတျော ထကျ ဒီအသငျးကွောငျးကိုပိုသိတဲ့သူလေ။ ဒီတော့ သူ့ကို အသငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ မေးမွနျးခဲ့ရတာတှေ အမြားကွီးပဲရှိခဲ့တာပေါ့။
သူကလညျး ကြှနျတေျာ့ ကို ကောငျးမှနျတဲ့ အကွံဉာဏျ တှေ ပွနျပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကတကယျကိုပဲ အရေးပါပါတယျ။ ယူနိုကျတကျ အသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ စပိုးတငျးနဲ့အစီအစဉျတှေ စကတညျးက တိုငျပငျဖွဈခဲ့တဲ့သူက ရျောနယျဒိုပါပဲ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောက ယူနိုကျတကျကို ပွောငျးမှာဖွဈပမေယျ့ သူ့အကွံဉာဏျတှကွေောငျ့ ပိုပွောငျးခငျြလာခဲ့ပါတယျ။
ဒီအသငျးက ဘယျလောကျကွီးကယျြခမျးနားကွောငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျ ဘယျလောကျကောငျးကွောငျး သူ အကွံပေး ပွောကွားခဲ့သလို ပွောငျးဖွဈအောငျလို့လညျးတိုကျတှနျးခဲ့ပါတယျ။ဆုဖလားတှအေတှကျ တိုကျပှဲဝငျဖို့လညျး သူက အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။” လို့ပွောခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတ်တွေဝမ်းသာအောင် အခုအချိန်မှ ထုတ်ပြောပြလိုက်တဲ့ ဖာနန်ဒက်ပြောတဲ့ ပေါ့ဘာရဲ့ကတိ အကြောင်း….
ဖာနန်ဒက်စ်ဟာ အခုဆိုရင် ယူနိုက်တက်ကို ရောက်ရှိလာတာ တစ်နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အသင်းမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်နေသလို အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ဦးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ယူနိုက်တက်မှာ ပေါ့ဘာနဲ့ ဘရူနိုတွဲဖက်မှုဟာ အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမားမရရှိသေးပေမယ့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖေးမကူညီလာတာကို တွေ့ မြင်ရပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ် ရောက်ရှိလာချိန်က ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေက ကွင်းလယ်မှာ ပေါ့ဘာနဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်တို့အတွဲဟာ တောက်ပလာမယ်လို့ အများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ဆိုလ်ရှားရဲ့ နည်းစနစ်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်အတွဲ ပွဲထွက်လာချိန်ဆိုရင် ဖာနန်ဒက်စ် က တိုက်စစ်ပိုင်းပိုမိုတာဝန်ယူလာနိုင်သလို ပေါဂ့်ဘာ က ခံစစ်နဲ့ချိတ်ဆက်မှု့ကိုတာဝန်ယူထားရတာကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။ ဖာနန်ဒက်စ်က ပေါ့ဘာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုအချိန်မှာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး အခြေအနေတွေကို ထုတ်ဖော်ပြောပြလာခဲ့သလို သူအသင်းကိုရောက်ကာစက ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်နဲ့ ပေါ့ဘာကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိပါတယ်။ ဒီကို စရောက်ကာစက သူနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးကြာခံဘာသာစကားက အီတလီစကားပေါ့ဗျာ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်က အီတလီမှာကတည်းက သိကြပါတယ်။ ဘာသာစကား အဆင်ပြေတော့ သူနဲ့ အလုပ်တူလုပ်ကြတဲ့အခါ အရာရာကလွယ်ကူတာပေါ့။
ယူနိုက်တက်ကို ကျွန်တော် ရောက်ခါစတုန်းက သူက ဒဏ်ရာရနေလို့နားနေချိန်။ သူ့ရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝဖို့ ကြိုးစားတာတွေ သီးခြားလေ့ကျင့်တာတွေ ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအချိန်တွေဆိုရင် သူနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့အခါတွေဆိုရင် သူက‘ငါမင်းရဲ့ ကစားဟန် တွေကိုတွေ့တယ်။ ငါသာကြံခိုင်မှု့အပြည့်ရလာပြီးရင် မင်းကို ထောက်ပံပေးမယ်လို့၊ ကွင်းထဲမှာ မင်းဘယ်နေရာမှရှိနေနေ ငါမင်းကိုရအောင်ရှာပြီး ဘောလုံးပို့ပေးမယ်’လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကို ယုံကြည်မှု့များစွာ ရစေခဲ့တယ်လေ။ သူ ပြန်ကောင်းမွန်လာတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးခဲ့သလိုအသင်းကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူပါပဲ”။
ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်လည်း ကျွန်တော်ကိုအကြံပေးခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ ရဲ့ လက်ရွေးစင်အသင်းဖော်ဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့ နာနီတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ သူက အခုအချိန်အထိ အချိအဆက်ရှိနေသလို ယူနိုက်တက်အသင်းအကြောင်းတွေကို ပြောလေ့ရှိတယ်လို့ ဖာနန်ဒက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။ “သူက ကျွန်တော် ထက် ဒီအသင်းကြောင်းကိုပိုသိတဲ့သူလေ။ ဒီတော့ သူ့ကို အသင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးမြန်းခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပဲရှိခဲ့တာပေါ့။ သူကလည်း ကျွန်တော့် ကို ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ် တွေ ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတကယ်ကိုပဲ အရေးပါပါတယ်။ ယူနိုက်တက် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စပိုးတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေ စကတည်းက တိုင်ပင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူက ရော်နယ်ဒိုပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က ယူနိုက်တက်ကို ပြောင်းမှာဖြစ်ပေမယ့် သူ့အကြံဉာဏ်တွေကြောင့် ပိုပြောင်းချင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီအသင်းက ဘယ်လောက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားကြောင်းနဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း သူ အကြံပေး ပြောကြားခဲ့သလို ပြောင်းဖြစ်အောင်လို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဆုဖလားတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လည်း သူက အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
တှမျမီနေးရဲ့ ဂိုးနဲ့ FA ဖလား နောကျတဈဆငျ့ကို တကျလှမျးနိုငျခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ